ရွှေကူမေနှင်း| February 15, 2013 | Hits:5,223
နမ့်ခမ်းတွင် ဆီလီကာ မိုင်းတွင်းလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းရန် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတရုတ် ၀န်ထမ်းများနှင့် ရန်ဖြစ်သော မြန်မာများ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရကန်ကြီးထောင့် အများပိုင်မြေကွက် အတွက် အာဏာပိုင်နှင့် ဒေသခံများ ပြဿနာဖြစ်နေရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းလားမှာ ကြီးထွားနေတဲ့ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းလက်နက်ကိုင် ဒေသထဲက အန္တရာယ်များသော မြေယာအငြင်းပွားမှု
Sandra Lin February 15, 2013 - 5:41 pm Here the author, ရွှေကူမေနှင်း, is blaming the squatters. The question here is who owns the land in the first place. It is quite likely that the land in dispute was confiscated without compensation from the poor farmers who were evicted forcibly, a.k.a land grabbing. They were then sold to current “owners” by corrupt government officials. This piece would beamuch balanced one if you include these facts.
Reply မိုးမြင့်ကျော် February 15, 2013 - 5:57 pm ရွှေကူမေနှင်း နှင့် ဧရာဝတီကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အခြေခံလူတန်းစား အချို့မှာ လုပ်သလိုမဖြစ်တော့ ဖြစ်သလိုလုပ်ရင်း အချောင်နေ အချောင်စား အရသာကိုသိလာကြသည်။ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ် မရှိတော့၊ ဘယ်လိုအချောင်ရမလဲ အမြဲစဉ်စားနေတော့သည်။ တောကြောင်အချောင်သမားကြီးတစ်ချို့ကလည်း ပါဝင်ဆင်နွှဲရင်း ကယ်တင်ရှင် ဟု ခံယူနေကြသည်။ ရှက်စရာကောင်းလှသည်။ နိုင်ငံသားတိုင်း အပြင်းအထန် အလုပ် မလုပ်သရွေ့ ဘယ်တော့မှ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကောင်းမည် မဟုတ်ပေ။ တိုင်းပြည်တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကကျသည့် အခြေအနေဖြစ် သဖြင့် မီဒီယာ များက အခြေအနေအဖြစ်မှန်ကို ဖေါ်ထုပ်သင့်သည်။
Reply ml February 16, 2013 - 3:39 am ဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ။ ကျွန်မ အမြင် အလွယ်ဆုံးပြောရရင် ဒီမိုကရေစီဆိုတာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးပါ။ နှစ်ရှည်လများ ဘိုးဘွားလက်ထက်ကတည်းက ကျူးကျော်မြေမှန်းမသိလို့ နေလာသူတွေထားပါ။ အခုက ကိုယ်မပိုင် မဆိုင်တာ သိလျက်နဲ့ ၀င်ဆောက်နေတာ လွန်လွန်းပါတယ်။ သည်လို ကျူးကျော်သူတွေရော (ဘယ်လိုကျူးကျော်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်) ဖယ်ခိုင်းချိန်မှာ လျောကြေး မပေးသင့်ပါ။ ကျွန်မ အဘိုးအဘွားပိုင်မြေကို အိမ်ခြေ ၂၀ ကျော် ကျူးကျော်ဝင်ဆောက်နေတာ ရှိပါတယ်။ နေ၀င်းလက်ထက်က ပြည်သူပိုင်ဆိုပြီး သိမ်းသွားပြီး အဒေါ်တွေ လက်ထက်မှာ ပြန်ပေးပေမယ့် ကျူးကျော်တွေကို ဖယ်ခိုင်းခ မတတ်နိုင်၊ သူတို့ကလဲ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေ လာဘ်ထိုး၊ သူတို့ဘက် ပါအောင်လုပ်ထားလို့ မြေပိုင် ဂရန်ရှိလျက် ထိုင်ကြည့်နေရတာ ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ဥပဒေစိုးမိုး၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကင်းရင် (ဒီမိုကရေစီ ရှိလျှင်) ကျွန်မတို့က မြေပိုင်ရှင်အမှန်တွေပါ။ အခုတော့ ဖယ်မပေးချင်ရင် မြေကွက်တွေကို ခွဲရောင်းပေးမယ်။ လက်ရှိပေါက်ဈေး မဟုတ်ပဲ တန်သင့်တော် ဈေးနဲ့ ပေးကြပါ ဆိုတာတောင် မ၀ယ်ချင်ကြဘူး။ သည်လို မိုက်လို့ ဖျာဝင်ခင်းသူတွေကိုတော့ လျော်ကြေးတောင် မပေးပဲ ဘူဒိုဇာနဲ့ ထိုးချသင့်ပါတယ်။
Reply မင်းခေါင် February 19, 2013 - 12:30 pm ခက်တာပဲ ကျူပ်တို့နိုင်ငံမှာ အုပ်ချူပ်သူရော အုပ်ချူပ်မခံတွေရော အမိုက်ပြိုင်နေကြတယ်
Reply သစ္စာဖြူ February 20, 2013 - 9:41 am စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို လိုက်လံဖြေရှင်းတာနဲ့
Reply bala February 20, 2013 - 10:15 am စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ ဖြစ်ခြင်တိုင်း ဖြစ်နေကြပါလားဟရို့
Reply angel February 20, 2013 - 12:57 pm နောက်ကွယ်မှာကြိုးကိုင်သူရှိမယ်ထင်တယ်လို့မပြောနဲ့တော့ရှိကိုရှိနေတာ။
Reply kumudra February 21, 2013 - 10:17 am This lawless action destroy our effort to democracy.